Imbiki Herilaza : «Tsy natao hanakorontana ny tsikera» | NewsMada
Imbiki Herilaza : «Tsy natao hanakorontana ny tsikera»
“Tsara ny mitondra tsikera ary harena ny fahasamihafana amin’ny hevitra. Fa entina hitsinjovana ny tombontsoa iombonana ny fitsikerana, mba tsy hiteraka fanakorontanana akory, sanatria. Rehefa mitsikera, mba mitondra soso-kevitra azo tsapain-tanana ihany koa.”
Io ny fanehoan-kevitry ny sekretera jeneralin’ny minisitry ny Fitsarana, Imbiki Herilaza, manoloana ny fitsikerana ataon’ny sasany etsy sy eroa amin’izao fiatrehana ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao.
Anaty fiombonam-po ny rehetra
Tokony ho anatin’ny fiombonam-po ny rehetra, araka ny nambarany.
Somary nohalefahana bebe kokoa ny fihibohana amin’izao, raha ho an’ny faritra Analamanga, ohatra. Mba hahazoan’ny sehatra tsy miankina sy ireo olona manao asa tena amin’ny andavanandro mandra-pahatonga ny amin’ny iray ora tolakandro. Mba hahazoan’izy ireo mitsinjo ny sakafo anio, tadiavina anio, izay.
Misy ny fangaraharana
Efa nisy ny tatitra ara-bola nivoaka momba ny fitantanana sy ny fanampiana rehetra azon’i Madagasikara avy amin’ny mpamatsy vola sy ny mpiara-miombon’antoka iatrehana izao ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao, izay anisan’ny mahatonga ny fitsikerana etsy sy eroa.
Raha jerena ny tatitra, hita mazava avokoa ny niavian’ireo famatsiam-bola. Eo koa ny andinindininy rehetra momba ny fampiasana sy fandaniana azy. Maneho izany fa misy ny fangaraharana momba izay fitantanana sy fandaniam-bola izay. Ankoatra izany, eo ny ezaky ataon’ny fitondram-panjakana anampiana ny sehatry ny toekarena sy sosialy.